Izimbadada Foundation: Favorite Responsible Travel Foundation
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Unomthwalo wemfanelo » Izimbadada Foundation: Favorite Responsible Travel Foundation
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha • Amasiko • Imfundo • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Investments • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • emihlanganweni • Izindaba • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ZaseTurkey neCaicos • Izindaba Ezihlukahlukene
Umsebenzi ovelele we Izimbadada Foundation ukuthuthukisa imiphakathi yaseCaribbean nokukhuthaza ithemba ezimpilweni zabantu bakulesi sifunda sekuphinde kwahlonishwa njengoba yabizwa nge “Favorite Responsible / Philanthropic Travel Foundation” emiklomelweni ehlonishwayo yama-Agents 'Choice Awards ngonyaka wesibili oqondile. Lesi simemezelo senziwe emcimbini obulindelwe kakhulu embonini yezokuvakasha eCanada obubanjwe cishe ngo-Okthoba 1, 2020.
ISandals Foundation yasungulwa ngonyaka we-2009 yiPhini likaSihlalo weSandals Resorts International, u-Adam Stewart, ukukhulisa umsebenzi wokupha owawuwumsebenzi oyinhloko wohlu lokungcebeleka olubandakanya ukunethezeka selokhu kwavulwa iminyango yalo eminyakeni engama-39 eyedlule.
“ICaribbean iyikhaya, futhi abantu bakhona bayimindeni. Sizibophezele ekutshaleni kabusha ikhaya lethu futhi sihlinzeke ngamathuba asiza abantu besifunda sethu ukuthi bakholelwe futhi bazenzele ikusasa elingcono labo nezizukulwane ezizayo, ”kusho u-Adam Stewart, iPhini likaSihlalo weSandals Resorts International.
Ama-Agents 'Choice Awards asungulwa ngo-1999 ngabaseBaxter Media baseToronto kanye nezincwadi zayo ezihamba phambili, iCanada Travel Press neTravel Courier. Ucwaningo lwaminyaka yonke luyisampula enkulu kunazo zonke zabasebenzeli baseCanada abakhetha abahlinzeki babo abathandayo abahamba nabo ezigabeni ezahlukahlukene. Kulo nyaka, nangesikhathi sobhadane lwe-COVID-19, abacishe babe yizi-6,000 38 ochwepheshe bezokuvakasha baseCanada bavote emikhakheni engama-XNUMX.
UStewart, ophinde abe nguMongameli weSandals Foundation, ukuqinisekisile wathi: “Siyajabula kakhulu ngokuhlonishwa ngabanikezeli bezokuvakasha abangakholeki kulo lonke elaseCanada ngalo mklomelo. Bangabalingani ababucayi okwenza umsebenzi wethu wenziwe. Ngokubambisana namalungu eqembu lethu, izivakashi, kanye nozakwethu senze umlando omuhle ezimpilweni zabantu abangaphezu kuka-990,000. ”
Ngo-2019, iSandals Foundation yamukelwa nguMnyango Wezokuxhumana Komhlaba Wonke weZizwe Ezihlangene njengenye yezinhlangano ezinemizamo eminingi ebamba iqhaza elikhulu ekufezeni i-Agenda Yentuthuko Esimeme kanye Nezinhloso Zokuthuthukisa Ezisimeme (SDGs).
Noma isifunda sathola ukungaqiniseki ngenxa yomthelela wobhubhane lwe-COVID-19, iSisekelo sahlala siyisibani, sinikeza usizo nokusekelwa emindenini nasezinsizakalweni zomphakathi.
UHeidi Clarke, onguMqondisi Omkhulu kwaSandals Foundation, uthe le nhlangano ebhalisiwe isazoqhubeka nokwenza umsebenzi wayo wokuqinisekisa ukuthi iziqhingi eziyisishiyagalombili ezisebenza kuzo zisendleleni yekusasa elizinzile.
“Njengenhlangano yesifunda, kuwumsebenzi wethu ukutshala imali ekuthuthukisweni okusimeme kweCaribbean. Sizoqhubeka nokuqinisa imiphakathi, sitshale imali yokufunda nokubhala, sisekele izindlela zokuziphilisa, sibandakanye intsha yethu, sisize labo abaswele, siqinise ezempilo, futhi sivikele imvelo ngezinhlelo ezishintsha impilo ezinikeza amandla ezimpilo, ”kusho uClarke.
ISandals Foundation isebenza eJamaica, eSt.Lucia, eGrenada, e-Antigua, eBarbados, eTurkey naseCaicos, naseBahamas abasebenza ezindaweni zemfundo, emphakathini nakwezemvelo.